Ingabe abaqeqeshi abalilungele ibhayisikili lakho? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Abaqeqeshi bamabhayisikili bayathengiswa - bephendula imibuzo
Abaqeqeshi bamabhayisikili bayathengiswa - bephendula imibuzo
Ingabe abaqeqeshi abalilungele ibhayisikili lakho?
Ngenkathi i- 'ride on aumqeqeshikuzolimazaeyakhocarbon frame ”inganekwane isuswe ngokusemthethweni, ukugibela endlini kusengaba usongoibhayisikili lakhongezindlela ezimbili: uhlobo lwamasondo nokujuluka komjuluko.04.17.2020
Uyemukelwa kokunye futhi Buza i-GCN-ything.- Kunjalo, usibuza noma yini futhi sizokwenza konke okusemandleni ukukuphendula. Okokuqala, Tom, sinombuzo wemingcele.
Lokhu kuvela kuJeremy Emilio obuze ukuthi ngimletha kanjani udadewethu, intombi yokugibela ibhayisikili. Manje ubunzima bubonakala kubo bonke. USmale Rider usikhombisa, 'Yima, bangabo bobabili?' Lapho uLuciano Namo athi, 'Kufanele uthole izinto ezimbalwa kuqala,' uJeremy, kungani uthandana nodadewenu? 'Futhi angicabangi ukuthi singabantu laba Abangaphendula umbuzo uTom. - Kulungile, kulungile.
Ngoba uJeremy welulela bonke abaphawuli abathintekayo wathi, 'Cha, bahlukene.' - Lokho kuyimpumuzo. Kulungile-ke, uthini udadewenu maqondana nokuhamba ngebhayisikili, Tom, mhlawumbe unolwazi oluningi ngoba unodadewenu nami anginaye, kanti owakho ungumgibeli wamabhayisikili onekhono futhi ophumelelayo, futhi naye mncane, ngakho-ke nawe kufanele ngabe wenze okuthile okulungile - omncane futhi osheshayo kunami.
Futhi sekuphele iminyaka eminingana. - Bengingafuni ukukutshela lokho, kodwa yebo. - Kuliqiniso, akunjalo? - Yebo. - U-Annie ungene kanjani emabhayisikili? Ngicabanga ukuthi u-Annie wangena ebhayisikili ngoba sasibancane kakhulu, mhlawumbe siyishumi noma shumi nambili.
Futhi bekuyinto yomndeni nje. Ngakho-ke uma udadewenu esemncane ngokwanele ukuthi usahamba nabazali bakho noma okunye, ukuzijabulisa nje ngebhayisikili yindawo enhle yokuqala. Uma sebekhulile kancane futhi ucabanga ukuthi badinga nje ukuqala ibhayisikili, angazi ngempela.
Ukugibela ikhefi? Ukuhamba nge-cafe kuyindlela enhle yokwethula abantu kumabhayisikili. - Yebo, ngicabanga ukuthi mhlawumbe kumayelana nokuzijabulisa, njengoba ushilo, bese uzama ukungabadikibalisi, ungabakhuphuli amagquma angenangqondo ubashiye eceleni komgwaqo, imigwaqo ethulile, lokhu kubaluleke kakhulu . Akekho othanda ithrafikhi lapho eqala ukuhamba ngebhayisikili.
Angisithandi impela isiminyaminya njengamanje. Kepha yebo, ngakho-ke asihambe. Sethemba ukuthi bazokusiza uJeremy.
Kulungile, ngokulandelayo sinalo mbuzo. O, ngithanda i-T. NguJukka Pakkanen.
Uyawagcina amabhayisikili akho amadala owathandayo? Wenzani nabadala uma ukhetha entsha? Wenzani? - Uma kungokwami ​​endala, ngingahle ngiyithengise .- Yebo, awuthandi ukonga izinto, akunjalo? - Cha, nginebhayisikili ebengiligcinile, nginamabhayisikili ambalwa engiwagcine kule minyaka edlule engikujabulela ukuwagibela njalo. Sino-GCN nozakwethu bamabhayisikili esimweni esijabulisayo kangisizwa isidingo sokuthi ngizizwe sengathi ngishintshanisa ibhayisikili lami njalo - yebo.
Yebo, ngigcine ifreyimu ezinsukwini zami zamabhayisikili asezintabeni ngoba ibhayisikili eliphelele lithathe indawo eningi kakhulu. Futhi ngokomthetho kuphelelwe yisikhathi noma kunjalo. Kepha ifreyimu yinto ekhethekile.
Bese ngigcina amabhayisikili amabili ezinsukwini zami zomjaho, ikakhulukazi uma ngingenawo amabhayisikili amahle avela kwa-GCN, ngisenawo amabili ami. Njengoba kunje, abadumile. Ngiyamthanda kakhulu. - Kazi uqhuba kanjani uMatt? Ngoba uthole ibhayisikili lakhe le-2000 Giro D'Italia.
Noma ibhayisikili lakhe lika-2000 Giro D'Italia latholakala esitolo samabhayisikili e-Italy, ngakho-ke uyalilandela. Leli ibhayisikili elithandekayo ngempela ngoba kunezinkumbulo eziningi ezinhle ezihambisana nalo - Mhlawumbe hhayi izinkumbulo eziningi ezinhle ezivela kulowo mjaho. Ube nesikhathi esinzima impela nayo.
Kwesokudla. Yebo, ngokuwa nokulimala. Kulungile, ngokulandelayo.
Ngabe kufanele ngikhathazeke ngokusebenzisa ibhayisikili lami lomgwaqo wekhabhoni kumqeqeshi we-turbo? ? Ngabe uzimele uzophuka ngaphansi kwemithwalo esindayo? Ngokuyinhloko, lena inganekwane ejwayelekile mayelana namafreyimu e-carbon fiber. Ukuthi akufanele uwasebenzise kubaqeqeshi be-turbo. Iqiniso liwukuthi, kusukela kulokho esingakwenza okukodwa esikukhulumile nabakhiqizi ukuthi akekho noyedwa kubo obonakala ethi iwaranti yakho ngeke ize uma uyisebenzisa kumqeqeshi we-turbo.
Lokho kungitshela, ngombono wami, ukuthi kuphephile. Kuthiwani uma uzama? Empeleni ngifuna umuntu onolwazi ngohlaka lwekhabhoni oluqhekeke ngumqeqeshi we-turbo, awukwazi ukumthola lowo, akunjalo? - Cha, awukwazi. Ngisola ukuthi ukukhathazeka mhlawumbe kuqhamuke ekulungisweni kwebhayisikili bese kuba ukunyakaza eceleni.
Kepha angikaze ngizwe ngakho. - Kunamabhayisikili amaningi amadala akade abaqeqeshi be-server isikhathi eside futhi angakhombisi zimpawu zokucindezeleka. Emuva ezinganekwaneni mayelana ne-carbon fiber, sinendatshana kuso, akunjalo? - Sine - Ilapho.
Yizinto eziyisikhombisa obungazazi nge-carbon fiber. Ukungezwani okuningi kuyabhujiswa kulesi sihloko. Bheka. (Umculo we-Rock) (Ehlobo) - Ukufaneleka kwento ethile akuxhomekile kokuqukethwe.
Ingxenye ngayinye kufanele yakhelwe inecala elithile lomthwalo engqondweni. I-Admi Vele, ngekhabhoni, njenganoma iyiphi impahla yohlaka, kunengozi yokuthi ungaya emikhawulweni yakho, Isibonelo, ukufeza inhloso elula kakhulu. Izinkinga zivele kuphela, noma kunjalo, uma zingakhiwanga kahle nge-Absolute Cracking Video.
Umbuzo olandelayo uvela kuSam Running, othi: Ingabe ubude beketanga buyalithinta ijubane lebhayisikili lakho? Usho ukuthini si? - Yebo, sikhuluma ngokulungiswa okuncane kwejubane, akunjalo. Njengo, i-watt noma amabili. Kepha uma ungakutholi kahle, kungenzeka.
Uma icinene kakhulu, ingahle idonse ngaphezulu kochungechunge. Futhi-ke uma yinde kakhulu kunamaketanga amaningi ongaphakanyiswa. Sikhuluma mncane, mncane.
Kepha ngokuyisisekelo kufanele ukuthole kufanele ngokushintsha kwakho. Futhi-ke futhi nokugcina iketanga lakho lingantengantengi futhi lingantengantengi. Ngakho-ke, yithole kahle ngalezi zizathu esikhundleni sokwenza ibhayisikili lakho lisheshe.
Kulungile, Tom. Ungakuphendula lokho? Lapho nonke nihambela phesheya niyoqopha ifilimu, lokho nguRyan Donnelly by the way, niletha umhumushi noma ingabe niyayishwibeka bese nithemba okungcono? Kungakulethela ini lokho? Ukuvela? - Yebo, Ryan, asihambi nomhumushi, asikhulumi ngezilimi eziningi ngaphandle kwesiNgisi. Abanye benu kungenzeka bazibuza ukuthi ngabe sisazi kahle isiNgisi noma cha.
Siyawazi amagama ambalwa ayisihluthulelo, kodwa izindawo eziningi esizidubulayo zithola abagibeli bamabhayisikili abaningi baseNgilandi nabangaphandle. Ngakho-ke, abantu bendawo bavame ukukhuluma isiNgisi. Kepha kufanele ufunde amagama ambalwa asemqoka uma uphume noma kuphi.
Futhi ngicabanga ukuthi yilokho esizokufunda kulesi sihloko esilandelayo, okungukuthi, “Amaphutha amahlanu okungafanele uwenze lapho uhamba ngebhayisikili phesheya.” (Umculo we-Funky) - Uma ushayela kwenye indawo okungajwayelekile, ungekho endleleni eshayiwe, nakanjani kufanele wenze ucwaningo lwakho. Bheka i-cuisine yasendaweni, injani imigwaqo, kunesibhedlela eduze, kukhona i-bi? ke ukuthenga eduze? - Yebo.
Ngaleyo ndlela, ungaba nokuthula kwengqondo. Kungakunciphisa futhi ukucindezelwa futhi kukukhiphe esimweni esinzima. Eqinisweni, lo akuwona umthetho omubi okufanele uwulandele noma ngabe useduze nekhaya lakho - njalonjalo komunye umbuzo.
Lokhu kuvela kuTommy L3. 'Hhe, ngithola ukugibela kuyisicefe manje, ngibuya kanjani inkuthazo efanayo nesifiso sokugibela ebenginaso ngenkathi ngiqala? Tom, ucabangani ngalo mngani? - Lowo ngumbuzo onzima, akunjalo? Ngoba asazi ukuthi uzithola unesithukuthezi ngandlela thile futhi wehliswa amandla ngokugibela, uTommy, emigwaqweni efanayo, noma into efana naleyo nsuku zonke. Ngingaphakamisa ukuthi uma uthola okuthile okuyisidina noma okwehlisayo, thatha ikhefu uma ukwazi.
Uma unenye indlela yokuhamba yokuya emsebenzini noma okuthile. Thatha izinsuku ezimbalwa, uvuselele, bese ubona ukuthi ungayithola yini eminye imigwaqo ongayishayela. Ngangihlala ngithola lapho ngisuswa kancane ukuthi into engiyithandayo ukuyenza ukuphonsa esigabeni samatshe noma engxenyeni yomgwaqo nje ukugcina izinto zintsha nokwenza izinto ngokuhlukile.
Kuthiwani ngawe? - Ngiyathola ukuthi kwesinye isikhathi lapho angifuni ngempela ukugibela nganoma yisiphi isizathu, lapho ngiziphoqa ukuba ngigibele ihhashi, ngijabulela ukujabulela ukuba ngaphandle. Ngakho-ke empeleni, njengayo yonke le nto, lalela umzimba wakho nenhloko yakho bese wenza okufunayo. Ukuzikhuthaza nakho kungasebenza izimanga.
Kepha hhayi esikhathini eside esizayo, nginosuku lokuphumula ku-30. Lapho ngicabanga khona, kahle, angifuni ukuphuma bese ngizokwenza futhi ngibe nesikhathi esimnandi. Lokho kungasebenza! Futhi, simangele isimanga, udaba oluphelele ngale ndaba.
Ngokuyisisekelo kufana nokwelulekwa kwezobudlelwano. Mina noDan sichaza ukuthi ungabunonga kanjani ubudlelwano bakho nebhayisikili lakho. Futhi yebo, kufaka izimpelasonto ezingcolile. (umculo omnandi) - Ukuzimela wedwa kungaba kuhle.
Kepha futhi kungakhathaza kakhulu. Ngemuva kwakho konke, unemicabango yakho kuphela amahora wenkampani. Ngakho-ke kungani ungagibeli nabanye? Manje, abantu abaningi bakhetha ukugibela nje nomunye umlingani, kwesinye isikhathi ungaba nabathathu kini abazophuma okungashiya omunye umuntu eshiywe kabi, noma ungakhetha ukuhamba ngeqembu elikhulu.
Kuyithiphu esobala, kepha iyasebenza impela. Isikhathi sizodlula ngokushesha okukhulu. Ngaphandle kwalokho, akukhona nje ukufika lapho uya khona ngokushesha, kepha futhi nangokuthokozela inqubo yokufika.
Le yindlela ongabelana ngayo ngamabhendi aphezulu futhi ube nesikhathi esimnandi ngokujwayelekile .- Amabhendi aphezulu? - Lowo mbuzo ubunezithupha eziningi. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kufanele sinikeze impendulo.
Futhi ivela kwaFree Wheeler. Ngubani onezithupha eziyi-182. 'Ngicabanga ukuthi kufanele wenze inselelo encane yezipho ze-GCN njalo ngenyanga lapho olahlekile khona-ke kuzodingeka asebenzise ibhayisikili ngemali engaphansi kuka- £ 150 kukho konke ukugibela kwabo, izindatshana ze-GCN, nesikhathi sabo sokuphumula abagibele kuze kube yilapho benza inyanga ezayo bangathemba ukuthi ahlenge.
Izithupha uma ufuna ukubona lokhu noma into efana naleyo. Abantu abangu-182 banikeze izithupha. Bese kuthi iFree Wheeler inikeze enye indlela yokuhlawuliswa kancane: 'Ungaba nejezi elihluliwe noma isikibha esilahlekile.' Okusazwakala kukubi kakhulu ngebhayisikili, noma ukugqoka isikibha esilahlekile inyanga yonke. - Yebo, ukulahlekelwa yinselelo ye-GCN kubi ngokwanele, ingasaphathwa eyokusijezisa inyanga ngemuva kwalokho, kufana nokugqoka isiwula ukuyilungela.
Futhi, Tom, sifunde kanjani endatshaneni yethu ukuthi ungashesha kangakanani ukusebenza ngebhayisikili elibizayo. Bekumele ngivuke imizuzu emihlanu ngaphambi kwesikhathi njalo ekuseni ukube bekungengenxa yami. Ngingasebenzisa iCanyon Aeroad yami ukushayela ukusebenza. - Kulungile. - Yebo.
Kulungile. Umbuzo wokugcina, lona uvela ku-Big Dog, Hey Big Dog, 'Hey GCN, abazali bami bathi angifanele, kepha uma kufanele ngithenge amaphilisi e-electrolyte kanye ne-powder yokuthola futhi ingabe ngiyayidinga, ngineminyaka engu-16 kuphela, umbuzo ovamile ngempela . Ngizokuhlukanisa kabili uma kungenzeka, Tom.
Okokuqala, ngicabanga ukuthi udinga ukuchazela abazali bakho noma ubenze babuke le ndatshana yokuthi, empeleni, imikhiqizo eminingi yokudla okunempilo yemidlalo yokukhuthazela izakhi nje ezijwayelekile esiziphuzayo, okungukuthi ama-carbohydrate, kungaba ngesitashi noma ushukela, ama-Electrolyte , okungosawoti nje kuphela esibafaka ukudla kwethu.
Isizathu sokuthi sizifake emabhodleleni ethu, emaphaketheni ethu angemuva, emabhayisikili ethu kungenxa yokuthi esikufunayo kithi kufanele sikuthathe okunye. Ngenkathi ngisemncane, kwakudingeka ukuthi ngemuva kokuhamba ngebhayisikili ebusika ngiphathwe yikhanda ngenxa yokwehla emzimbeni futhi ngingazi ukuthi ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kuyini. Empeleni, ngabe ngazuza kakhulu kumathebhu e-electrolyte emuva lapho.
Konke okukuko kuwusawoti omncane ebhodleleni, kepha ngokuyisisekelo bekungangivimba ekutholeni isiqhwaga ekugibeleni amabhayisikili. Mhlawumbe okuwukuphela kwento okukhona okuncane okuqaphileyo yimikhiqizo yokuzijabulisa. Kuhle nje ukudla okujwayelekile, ngamaphrotheni nje awudingi.
Ngakho-ke esikhundleni sokukulimaza, vele ukhiphe. Futhi uchitha imali ngayo. Ngakho-ke sinendatshana emayelana nokululama futhi kunezeluleko eziningi ezilula nezisebenzayo laphaya.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuzokusiza ngalo mbuzo othile. O nkosi yami mina! UBarry akaphephile kubantwana abaneminyaka engu-16. Kwakungafanele ngikubone lokho. - O Nkulunkulu. (umculo omnandi) - Umzimba wakho udinga uphethiloli ozowugibela.
Futhi ikakhulukazi ngesimo sama-carbohydrate uma ungaphezu kwama-65% wesilinganiso senhliziyo yakho esiphezulu, futhi namafutha impela. Ngaphandle kohambo olufushane kakhulu, manje usuzosebenzisa kakhulu lonke uhambo loqeqesho. Amandla akho ngandlela thile ayazigcina ngenkathi usaphumile futhi usasebenza. - Kulungile, ngiyesaba ukuthi amazwibela e-athikili yokugcina asiletha ekugcineni kombuzo ohlukile we-GC Anything.
Uma unemibuzo evuthayo mayelana nokuhamba ngebhayisikili, ake sisuke kulowo mbuzo wobudlelwano obunzima ekuqaleni, bese usazisa kalula esigabeni sokuphawula ngezansi noma usebenzise i-hashtag #TorqueBack, bona ukuthi senzeni lapho? ku-Twitter nakwezinye izinhlobo ezahlukahlukene zokuxhumana - futhi uma ufuna ukubona okuqukethwe okuningi, uma ubambekile kule mpelasonto futhi usafuna ukuzivocavoca umzimba, kungani ungazivocavoci nathi iSion? indinyana esabekayo emachashazi? I-athikili ikhona lapho. - Xwayiswa. Kuyisikhathi esinzima impela. - Kuyisihluku.
Futhi lokhu empeleni kuyinkinga eyanda ngokujwayelekile yabantu. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungasusa kanjani futhi ubuyisele ubakaki ongezansi we-Pressfit lo akuwona umsebenzi olula, sinendatshana ngakho futhi, kunjalo lapho - futhi uqiniseke ukuthi ubhalisela i-GCN futhi ngaphambi kokuya, uma ufikile ' t vele. Ukuze wenze lokhu, mane uchofoze emhlabeni, kumahhala ngokuphelele.
Ingabe abaqeqeshi bamabhayisikili bayakufanele?
Uma kukhulunywa ngokuzivocavoca kwangempela, awukwazi ukungahambi kahle nganoma yini. Zombili zasendliniabaqeqeshi bamabhayisikilifuthi umileemabhayisikiliingahlinzeka ngokuzivocavoca kwe-aerobic esezingeni eliphakeme, inqobo nje uma uzimisele ukufaka umsebenzi. Uma inhloso yakho enkulu ukuthuthukisa impilo yakho yenhliziyo kanye / noma ukushisa amakhalori, ukukhetha kungokwakho.08/31/2020
Yimuphi umqeqeshi webhayisikili wasendlini ongcono kakhulu?
I-abaqeqeshi bamabhayisikili abahamba phambili kakhulu
Okuhamba phambiliisiyonke. I-Elite Direct 2 Interactive SmartUmqeqeshi. $ 769.00.
Okuhamba phambiliuhlakaniphileumqeqeshi. I-Tacx NEO 2 SmartUmqeqeshi Wangaphakathi.
Okuhamba phambiliidrayivu eqondileumqeqeshi. I-Unisky Direct DrayivuUmqeqeshi webhayisikili.
Okuhamba phambiliIsigaba sokuqalaumqeqeshi. I-Wahoo Fitness Kickr SnapUmqeqeshi webhayisikili.
Okuhamba phambiliisabelomaliumqeqeshi. ISaris CycleOps Fluid2Umqeqeshi Wangaphakathi.
Kubiza malini abaqeqeshi bamabhayisikili?
Wenacantholaabaqeqeshiukuqala kusuka ku- $ 50 yonke indlela kuze kufike ku- $ 2500 (yebo, bantukukhonangizimisele ukuchitha lokhookuningi). Kodwa-ke, ngaphandle kwentengo, konkeabaqeqeshi bazokwenzaukukunikeza ipulatifomu yangaphakathiukuhamba ngebhayisikili, ukuthi nje lezo ezibizayo zinokukhetha okuningi nezici.08.03.2021
Awudingi igiya eliningi ukuze uqalise ngeZwift. Ngaphandle kokubhalisela kwakho iZwift uqobo, okudingayo umqeqeshi olula we-turbo, isivinini senzwa, bese nje usebenzisa i-smartphone yakho ukusebenzisa i-Zwift on - noma kunjalo, ungatshala imali kwimishini emangalisayo ukuthuthukisa ulwazi lwakho. U-Wahoo ngomusa usinikeze izintambo zabo ezigcwele zeKickr ngakho-ke sinomqeqeshi ohlakaniphile, fan, futhi esikhuphuka lezo zinguquko ezifana nokuthi ungaphandle. - Yebo.
Umbuzo, nokho, empeleni uyini umehluko wesipiliyoni phakathi kwalezi setups ezimbili? Sicabange ukuthi sekuyisikhathi sokuthi senze izibalo ezimbili zentloko nekhanda ukuthola. Ukusetha ileveli. Sizitholele umqeqeshi olula wamasondo.
ukuzivocavoca ukuthuthukisa ukuma kwehlombe
Inayo iyunithi yokumelana kazibuthe engalungiswa ngesandla kusetshenziswa lesi sigqoko. Noma ngubani obesenesikhathi eside ehamba ngebhayisikili uzolwazi lolu hlobo lwe-turbo, ngoba, uma sikhuluma iqiniso, yilokho ababeqeqeshwa yibo bonke abaqeqeshi be-turbo. Futhi ngenxa yalokhu, ungabathola manje ngokushibhile.
Ngakho-ke isingeniso esihle emhlabeni wokuqeqeshwa kwasendlini engikushilo ekuqaleni ukuthi udinga inzwa yejubane. Okubalulekile, nokho, ukuthi inzwa yejubane exhuma kudivayisi ozoyisebenzisa kuyo. Uma unenzwa yejubane ethumela i-ANT +, maningi amathuba okuthi ngidinga i-adaptha ukuze ngithathe isignali kusuka kukhompyutha yakho noma i-laptop noma yini.
Kulokhu, ibuye idlulise nge-bluetooth, okusho ukuthi ngingayithatha ngqo kwi-smartphone yami, engizoyisebenzisa kulokhu. Khumbula ukufaka le sensor yesivinini esondweni lakho langemuva ngoba yilokho kuphela okuguqukayo. Uyibe usuyibhangqa nedivayisi yakho, lapho ingatshela khona iZwift ukuthi isondo langemuva ligijima ngokushesha okungakanani.
Into ehlakaniphile ukuthi uma utshela iZwift ukuthi usebenzisa muphi umqeqeshi ngoba babalile ukuthi umqeqeshi ngamunye udala malini. Lokhu kusho ukuthi uma azi ukuthi lishesha kangakanani isondo langemuva, uyakwazi ukubala ukuthi ulisebenzisela amandla angakanani. (Joy Techno Music) - Ngakho-ke lapha sineWahoo Kickr, iKickr Climb, neKickr Headwind.
I-Wahoo Kickr ingumqeqeshi wabo we-smart turbo ohamba phambili, futhi umehluko osobala kulena naleyo uSi ayisebenzisile ngaphambilini ukuthi ibhayisikili lami alinayo i-turbo yangasemuva eqonde ngqo ekushayeleni eza iphelele ngekhasethi lakhona. Lokho kusho ukuthi, awusasebenzisi isondo lakho langemuva futhi ngeke ugcine ngalezo zimaki ezimnyama lonke udonga. Kepha ngaphakathi umehluko wangempela.
ITurbo inophiko lokumelana okuguqukayo nemitha yamandla, okusho ukuthi zombili zibala ngokunembile amandla ami futhi zilungisa ukumelana engikuzwayo kuma-pedals kuya ngokuthi ngihamba kuphi kuZwift. Lokhu kusho ukuthi ukukhuphuka umqansa empeleni kuzomuzwa njengokukhuphuka futhi kuzofanele ushintshe amagiya ngokufanele. Okokuqala, futhi esinakho lapha yiWahoo Kickr Climb.
Lokhu kulingisa ngokuzenzakalela ukuthambekela futhi kulingise okwenzekayo kuZwift. Kuze kufike ku-20% ukuthambekela no-10% ukuthambekela. Futhi ekugcineni sineKickr Headwind, futhi lo ngumlandeli oxhuma kumqeqeshi wakho we-turbo noma wokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo futhi alungise ukupholisa ngokuya ngamandla wokugibela kwakho.
Ngokuqinisekile ungakudlulisa lokhu bese umane ukwenze lokhu kufinyelele ku-max. - Chris, kufanele ngabe uZwift? - Asikwenze. - Ngaphambi kokuthi siqale, xolisa, mfowethu, ngokuzenza ungene kusethingi esezingeni lokungena.
Kwenzeka lokhu nje ukuthi asinawo ama-adaptha adingekayo alo mqeqeshi ukuze ngikwazi ukugibela ibhayisikili lami elihlukile kuwo. Ngakho-ke kufanele ungitshele yonke into, mngani - anginasiqiniseko sokuthi ngabe lokho bekuyizaba eziqotho kakhulu, kepha ake siqhubeke. - Kulungile, asihambe. (umculo othambile we-techno) - Into yokuqala ozoyibona ngenkathi ugibela ukusetha okuyisisekelo ukuthi ayikho impendulo eqondile ngezinyawo.
Alukho ushintsho ekumelaneni lapho ugibela ekukhuphukeni noma ekwehleni. Ngenkathi ngikukhumbula ngempela lokho, ngicabanga ukuthi kungenzeka kulungile ukusho ukuthi uma ungazange ugibele umqeqeshi ohlakaniphile, awazi ukuthi yini oyilahlekile noma kunjalo, ngakho-ke gxila kulokho ongenakho, kepha kulokho uyenza. Usengasebenzisa zonke izici zenhlalo zeZwift, ungene ngemvume futhi ushintshe i-avatar yakho, udlulele kuwo wonke amazinga, uhlole umhlaba futhi ubambe iqhaza ekugibeleni amaqembu, ukusebenza koqeqesho kusekhona.
Ungabhalisela futhi usebenzise ngokunenzuzo izikhathi eziningi zokuqeqeshwa uZwift anazo bese ugibela kubo Ungakhohlwa ukuthi umzamo engiwufakayo usafana noma ngabe yimuphi umqeqeshi. Isilinganiso sokusebenza silungele ukuqeqeshwa futhi, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokulandela ukuthuthuka kwakho. Uma ikutshela ukuthi une-FTP yama-200. Uthole ama-watts, futhi ukwenyusile lokho kwaba ngu-220, lokhu kuyinzuzo yangempela yokuqina.
Yebo, kungahle kungabi okunembile, futhi nezinga lephutha lingasho ukuthi uhambe kusuka kuma-watts angu-240 waya ku-270, kepha ake sithi uma siqhubeka nokusetha okufanayo imiphumela kufanele okungenani ihambisane. (umculo othambile we-techno) - Kuthiwani ngokusethwa kwama-frills ethu lapho? Yini esiyitholayo Well, kulandela lokho uChris asanda kukusho ngokuqeqeshwa, imitha yamandla kule Kickris inembile ngo-2% kuphela, okusho ukuthi singayisebenzisa ukubhekisisa ukuqeqeshwa kwethu, futhi kusho nokuthi siyabona imiphumela yakho ingaqhathaniswa neyabanye abantu, njengoba ukunemba okungu-2% kuyinto efana nezinga legolide. Hhayi-ke, ungahle ungathandi ukujija i-FTP yakho phambi kwabanye abantu, kepha ukuthi Kusho Ukuthini kuZwiftis Ukuthi Uyakufanelekela Ukuthumela Imiphumela Emjahweni WeZwift ngoba Izinhlanga Zwift ziyazi ukuthi usebenzisa imishini ethembekile ungayibiza nge-erg mode, futhi kulapho umqeqeshi ezokwakha khona ukumelana ngqo okudingekayo esikhaleni ngasinye.
Futhi lokho kususelwa ezibalweni ezenziwe nguZwift ngokususelwa kumakhono ami. Ngokwenza lokho kusho ukuthi uma, ngokwesibonelo, isikhawu singama-watts angama-350, inqobo nje uma ngivula amaphedali, lo mqeqeshi uzokhipha lokhu kumelana. Lokho kusho ukuthi ngizoletha ama-watts angama-350, noma ngabe ngishesha kangakanani noma ngihamba kancane kangakanani.
Kodwa-ke, kimi, mhlawumbe ukuthuthuka kokuhlangenwe nakho kokushayela okuphawuleka kakhulu. Impendulo oyithola kumqeqeshi incike kokwenzekayo esikrinini. Ngakho-ke lapho ngiqala ukukhuphuka ngizozwa ukumelana, okusho ukuthi kufanele ngishintshe amagiya, bese kuthi ngalezi zangaphambili zeKickr zikhuphuke, ukuthambekela kwebhayisikili lami kuyashintsha, okusho ukuthi ukuma komzimba wami nakho kuyashintsha.
Ngenkathi ngingalwi namandla adonsela phansi manje, kuzwakala sengathi okuphambene nalokho kuyenzeka njengoba ngiya ekwehleni, ukumelana kuyancipha bese siyahamba. Ngicabanga ukuthi kulungile ukusho ukuthi ukusebenzisa umqeqeshi ohlakaniphile kungathuthukisa ukuzivocavoca kwakho, njengokuthi nje uma unemitha yamandla ebhayisikili lakho, ngoba ungakwazi ukumba ujule futhi uqiniseke ukuthi ukujima, okwenzayo kulungile impela. Futhi okunye okunye ngaphandle koqeqesho, uma ungumlandeli omkhulu wokugibela iZwift, umphakathi, isici senhlalo lapho ukuba nalokhu kusetha kuzokwenza isipiliyoni sibe ngcono kuwe.
Kepha izindaba ezinhle ukuthi noma iyiphi indlela, yebo, ayidingekile neze. Kodwa-ke, engingakwenza uma ngizozama ukudlulisa kusuka kulokhu ngiye ekusetheni okuyisisekelo kuqala uhlobo oluthile lokukupholisa. Ngakho-ke uzogibela ngaphakathi ushisayo, ngakho-ke noma yimuphi umlandeli wakudala ungcono kunalutho.
Yize kunjalo, ngcono fan, kungcono ukupholisa kwakho kube ngcono. Okunye futhi ukuthi i-smartphone esetshenziswa uChris iyasebenziseka ngendlela emangalisayo, ikakhulukazi uma uhambahamba, uzothola ukuthi ukusebenzisa isikrini esikhudlwana kuzokwenza uxhumeke kakhudlwana. Ngakho-ke ithebhulethi, noma kulokhu, i-Apple TV exhunywe esikrinini esikhulu, futhi empeleni ngizizwa ngixhumeke kakhulu emhlabeni wami obonakalayo.
Futhi into enhle ngakho-ke ishiya ifoni yakho mahhala kuhlelo lokusebenza lomngane. (upbeate techno music) - Sekuyisikhathi eside ngisebenzisa uZwifton umqeqeshi ojwayelekile wasendlini we-turbo onjengalona, ​​futhi kuyinto exakile ukungakuzwa ukukhuphuka noma ukuzwa ukushelela njengabanye? dlula kimi kepha uma bengingakaze ngizwe ukuthi bengingeke ngazi ukuthi kukhona engikuphuthele - Cha, kepha njengoba usuke ekubeni ngumqeqeshi ojwayelekile waba ngumqeqeshi okhaliphile, uzizwe kanjani kuwe, lesi sinyathelo sisondele? - Ngikuthokozele kakhulu ngoba angihlali ngenza iseshini yokuziqeqesha ngakho-ke lapho ngingena ngemvume bengifuna nje ukugibela noma ukugibela kanzima njalo, ngifane nendaba yesitayela, futhi ngizwe sengathi umqansa uyakushaya esikhundleni salokho yokuthi kufanele ushintshe amagiya ukuze ushintshe umfutho yebo ngicabanga ukuthi yinto, ngotshalo-mali oluthe xaxa lwalaba baqeqeshi abasebenzisanayo, uthola into ingokoqobo futhi iphula isipiliyoni esisodwa esihle kakhulu, njengoba usho, kufanele phendula kuso ibhayisikili lami limane livele lapho lapho ukuthambekela kuqala.
Kufanele uphendule ngokwenzeka emgwaqeni, ngakho-ke kwephula izinto, uyashintsha, kufanele uthathe i-cadence yakho, ujwayele lezo zinguquko zokumelana, futhi kuzwakala njengokugibela ngaphandle. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi amandla wokusetha okuyisisekelo ukuthi usenezinto eziningi ze-Zwift ezitholakalayo ukuze uthole konke ukusebenzisa - yebo - futhi uzozizwa ujwayelekile. Banamandla okulawula okuphelele phezu kwabo futhi unezinto zomphakathi futhi, ngakho-ke sithanda ukugibela ndawonye, ​​akunjalo? - Yebo, nami - - Noma ngicabanga ukuthi ngikulahlile - Uh, kancane ekuthambekeni komqeqeshi we-turbo ukuze ngazi ukuthi ngizama kanzima kangakanani - Yebo.
Ngabe kulungile? - Yebo, mhlawumbe. Empeleni akukude kangako - yebo, asihambe. (upbeate techno music) Ukusonga lo mbhalo, kufanele sisho into eyodwa ikakhulukazi, futhi lokho ukuthi sinabaqeqeshi lapha ekugcineni okuhluke ngokuphelele kobubanzi.
Futhi akusikhona noma-noma isimo ngoba kukhona abaphakathi, akunjalo? Ngakho-ke ungathola abaqeqeshi abasebenziseka kalula abangabizi imali engako, kepha lokho kukunika umuzwa wokusebenzisana owuthola eZwift. Ngakho-ke unamayunithi wokumelana okuguquguqukayo kanye namamitha kagesi akhelwe ngaphakathi. - Ukuze uthole okuhle kakhulu kumqeqeshi wakho ojwayelekile we-turbo, uzofuna ukugcina umkhondo wengcindezi yakho yamathayi, kanye nengcindezi yomoya namazinga okushisa egumbini bayayisebenzisa ku.
Lokhu kuzokusiza ukuthi uthole amamethrikhi wokusebenza ongcono futhi angaguquki. - Yebo, kunjalo, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi uma ugxuma kuyo uyazi ukuthi kulinganisa ukuzikhandla kwakho, noma ngabe akunembile njengemitha yamandla noma umqeqeshi ohlakaniphile osebenzayo. Futhi masikubhekane nakho, noma ngaphandle kwalezi zinto ezibandakanyayo, uthola cishe zonke izinzuzo zeZwift.
Ngakho-ke unakho konke ukusebenzisa okufana nokushilo ngaphambili. Unazo zonke izinto zenhlalo, ungathatha ukugibela kweqembu, ungashayela kule mihlaba eyenzelwe ngokukhethekile ukuhamba ngebhayisikili. Kwesokudla, qiniseka ukuthi uyabandakanyeka esigabeni sokuphawula ngezansi.
UBradley ugudla irekhodi lehora
Ngethemba ukuthi uthole ukuthi le ndatshana ilusizo kwasekuqaleni kulokho okudingayo ukuqala iZwifting noma empeleni uthathe izinyathelo ezilandelayo, kepha usazise ukuthi usebenzisa ini futhi. Kungaba okuthokozisayo ngempela ukufunda lokhu kumazwana abekiwe.
Yimuphi umqeqeshi we-turbo ongcono noma ibhayisikili lokuzivocavoca?
Abaqeqeshi beTurbomancane kakhulu kunokuphothaemabhayisikili, ngakho-ke kulula kakhulu ukuhamba nokugcina lapho kungasetshenziswa. Uma ufuna ukuzivocavoca okungokwemvelo okuphindaphinda ukuzwa kweukuhamba ngebhayisikiliemgwaqweni ovulekile keabaqeqeshi be-turboicilongo langaphakathiukuzivocavoca amabhayisikili.
Ngabe ngidinga umqeqeshi ohlakaniphile ngempela?
Ngenkathi sikhuluma ngezindleko, kufanelekile ukukhumbula ukuthi awukwenziUdinga umqeqeshi ohlakaniphileukugibela eZwift. Aumqeqeshi ohlakaniphileidlulisa idatha yakho yamandla futhi ingashintsha ukumelana ukuze uzwe amagquma abonakalayo, kepha ungasebenzisa i-classic esekelwayoumqeqeshikanye nenzwa yejubane esikhundleni.Disemba 12 2019
Yimuphi umqeqeshi webhayisikili osebenzisa okuhle?
Abaqeqeshi beTurbokwebuhle- Iniabaqeqeshi benza proamaqembusebenzisaukuqeqeshwa kwasendlini? Okufaka i-Tacx, i-Elite nokuningi.Abaqeqeshi beTurbokwakujwayele ukubukwa ngokudideka nokwesaba kufayela le-ngobai-peloton. Kwakungezezikhathi zokufudumala kwe-TT nezikhathi zesikhawu phakathi nezinsuku ezibandayo zasebusika.Februwari 4 2019
Kungani abaqeqeshi bamabhayisikili bebiza kangaka?
Ngenkathi ezinye ziyinkimbinkimbi kakhulu, zinikela ngezici eziningi futhi zithandwa kakhulu kunezinye, eziningi zingatholwa ngaphansi kwe- $ 300 USD. Ngoba i-ukuhamba ngebhayisikiliumphakathi wamukele izinsiza ezisebenza nge-inthanethi njengeZwift, isidingo se-smartabaqeqeshiiyaqhubeka nokukhuphuka futhi ngenxa yalokho amanani nawo azokwenyuka.
Ingabe abaqeqeshi bamabhayisikili balukhuni kumasondo?
TOumqeqeshi wamabhayisikiliempeleni ifreyimu enesigaxa sokubamba eyakhoibhayisikiliendaweni njengoba ugibela nge-roller ecindezela ngemuvaisondo, ukudala ukumelana. Aumqeqeshikungadala umonakalo ngemuva kwakhoisondo, noma kunjalo, ulahla eyakhoibhayisikiliibhalansi nokudonsa.Juni 14. Februwari 2020
Ingabe abaqeqeshi bamabhayisikili bawalingana wonke amabhayisikili?
Ukulingana kwebhayisikili:Abaqeqeshicankufanelekileanhlobonhlobo weemabhayisikili, kepha udinga ukuhlola kabiliumqeqeshifuthiibhayisikiliama-specs ukuze uqiniseke. Izingxenye ezingeziwe: Iningi ledrayivu eqondileabaqeqeshikudinga ukuthi futhi uthenge ikhasethi elingemuva elihambisana ne-ibhayisikiliukuqhuba.
Ngabe iZwift iyakufanelekela ngaphandle komqeqeshi ohlakaniphile?
Ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu, aumqeqeshi ohlakaniphileKunconyelwa i-UZwift. Kodwa-ke, uma une-classic kuphelaumqeqeshi, bese uthola imitha yamandla noma isivinini kanye ne-cadence sensor yakhoibhayisikilikuzokwenza ukwazi ukukujabulelaUZwift.
Hlobo luni lwabaqeqeshi bamabhayisikili abaku-eBay?
Isondo lihlala ku-roller, linikeza ukumelana. Uzothola abaqeqeshi bamabhayisikili abahlukahlukene abazothengiswa ku-eBay kusuka kumikhiqizo kubandakanya iCycleOps, iDrivo, neJetBlack. Izinhlobo eziyinhloko abaqeqeshi bamabhayisikili omoya, kazibuthe, kanye noketshezi. Lesi ngesinye sezitayela ezindala kakhulu zomqeqeshi webhayisikili langaphakathi. Isenzo sokuphehla amandla amandla fan, okunikeza ukumelana.
Ngingamthengela kuphi umqeqeshi webhayisikili wasendlini?
Uzothola abaqeqeshi bamabhayisikili abahlukahlukene abazothengiswa ku-eBay kusuka kumikhiqizo kubandakanya iCycleOps, iDrivo, neJetBlack. Izinhlobo eziyinhloko abaqeqeshi bamabhayisikili omoya, kazibuthe, kanye noketshezi. Lesi ngesinye sezitayela ezindala kakhulu zomqeqeshi webhayisikili langaphakathi. Isenzo sokuphehla amandla amandla fan, okunikeza ukumelana.
Yini okudingeka uyazi ngomqeqeshi webhayisikili?
Uyini umqeqeshi webhayisikili? Abaqeqeshi bamabhayisikili asendlini bangamagiya ezemidlalo avumela abagibeli bamabhayisikili ukuba baqeqeshe ngaphakathi ngamabhayisikili abo angaphandle. Ungazisebenzisa uma isimo sezulu singesihle kepha usafuna ukungena ohambweni lwakho. Futhi ziyasiza ekuvuseleleni ngemuva kokulimala.